ဒီဇယ်ရောင်ချိန်ခွင်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အသုံးအများဆုံးခံစားချက် - MECCA Power
နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / ဒီဇယ်မီးစက်အစုံများ၏အသုံးပြုမှု၏သာမန်အသိ
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-06-09 မူလ:ဆိုက်ကို
1. ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူအစုံ၏ဘက်ထရီပါ0င်မှုသည်ဘက်ထရီအားသွင်းနိုင်မှုကိုမလုံလောက်ပါ။
2. Diesel Generator Set ၏ဘက်ထရီ cable နှင့် plug နှင့် plug ကို plug သည်ဘက်ထရီ cable နှင့် plug ကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးပါ။
3. ဒီဇယ်ဆီ Generator ၏အလယ်အလတ်ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်လွှင့်သူသည်မအောင်မြင်ပါ။
4. ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ set-check လုပ်ပြီး starter ကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။
5 ။ လောင်စာဆီစနစ်တွင်လေကြောင်း0င်ရောက်ခြင်းသည်လောင်စာဆီစနစ်တွင်လေထဲသို့လွှင့်ပစ်ပါ။
11. အီလက်ထရွန်နစ်ထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏တိုက်နယ်ပျက်ကွက်မှု, ဒီဇယ်ဆီမီးစက်၏မြန်နှုန်း sensor သည်သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုစစ်ဆေးပါ။
ဒီဇယ်ဆီမီးစက်ဆီကိုမှန်ကန်စွာပြောင်းလဲရန်မည်သို့မှန်ကန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သနည်း။ ဤမေးခွန်းသည်အသုံးပြုသူများစွာကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်, ထို့ကြောင့်သင့်အားမှန်ကန်သောလမ်းညွှန်မှုကိုပေးပါမည်။
2. ဒီဇယ်ထွန်း့စ်၏အစုံ၏ဆီကိုဖြည့်စွက်ထားသောရေနံမှေးမှိန်ခြင်း (ထိုအရာသည်ရေနံဒီ dipstick) နှင့်၎င်းကိုဖယ်ရှားပါ။
3. ဒီဇယ်ဆီမီးစက်အရဆီဒယ်အိုးကိုတင်ပါ, ရေနံယိုစီးခြင်းဝက်အူကိုဖယ်ရှားပါ။
4. ရေနံယိုစီးခြင်းဝက်အူ, တံဆိပ်ခတ်ကွင်းနှင့်ရာဘာလက်စွပ်များကိုစစ်ဆေးပါ။
1. ဒီဇယ်ရောင်ထုတ်လုပ်သူ set ကိုနာရီ 20 (သို့မဟုတ်တစ်လ) ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုပြီးနောက်ရေနံကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲသင့်သည်
2. နာရီ 1000 (သို့မဟုတ်6လ) တိုင်း (6 လ) တိုင်းဆီကိုပြောင်းလဲရမည်။ (ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်) သည် Sae10w30 နှင့် SG, SJ သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသော API အမျိုးအစားဖြင့်စင်ကြယ်သောရေနံကိုသုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။